Oke nchedo maka MacBook gị na Mmetụta Mmetụta Na Tech21 | Esi m mac
Ọzọkwa anyị ikwughachi nke ngwaahịa iri maka nchedo MacBook anyị ihe ọ bụla ya diagonal. Site na nke a anyị chọrọ ịgwa gị na ị nwere ike ịchọta ụdị mkpuchi nchekwa a maka diagonals nke 13 na 15 n'ihe banyere MacBook Pro Retina, na diagonals 11 na 13 sentimita asatọ maka MacBook Air, na 12 sentimita asatọ maka 12-anụ ọhịa MacBook na 13 sentimita asatọ maka MacBook 13 nke anụ ọhịa na-enweghị ọgụ Retina.
Casing Mmetụta Snap site na Tech21 na-echebe ngwaọrụ site na bumps kwa ụbọchị na ọkọ. Site na ya ị ga-enwe ọ advancedụ nchedo dị elu na mmetụta ekele maka njirimara Impactology nke Tech21.
N'ahịa enwere ọtụtụ nhọrọ mgbe a bịara n'ihe mkpuchi mkpuchi na mkpuchi maka laptọọpụ Apple, mana dịka nke anyị na-eweta taa enweghị ndị ọzọ na ọ bụ na n'azụ ya na-eduga n'ịmụ banyere injinịa dị nnọọ elu.
Mmetụta Mmetụta nwere FlexShock, ngwakọ ngwakọ nke ezubere iji nweta ume site na mmetụta ma gbasaa ma gosipụta ya, na-echekwa MacBook ọtụtụ ihe echedoro. Banyere agba ndị dịnụ, anyị nwere ya na rọba translucent na agba dị iche iche, dabere na ụdị MacBook nke anyị ji zụta ya.
Pricegwọ ya bụ 69,95 euro na VAT n'ihi na ihe niile diagonals na bụ dị na weebụsaịtị Apple. N'ebe a, anyị na-agbakwunye vidiyo nke ị nwere ike ịmatakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Oke nchebe maka MacBook gị na Tech21 Impact Snap Case
Apple na ndị otu SAP gbanwere ọrụ na iPhone na iPad